“Wax macno ah uma laha CR7 inuu kusoo laabto Real Madrid” – Florentino Perez – Gool FM
“Wax macno ah uma laha CR7 inuu kusoo laabto Real Madrid” – Florentino Perez
(Madrid) 20 Abriil 2021. Madaxweyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ahna madaxweynaha isu tagga kooxaha ku mideysan tartanka European Super League ee Florentino Perez ayaa tilmaamay inaysan muhiimsad gaar ah u lahayn Cristiano Ronaldo inuu kasoo tago Juventus si uu ugu soo laabto Madrid.
Perez oo xalay la hadlay El Chiringuito ayaa wax badan faaqiday arrimaha Super League, hase ahaatee, waxaa sidoo kale su’aalo laga weydiiyay wararka Ronaldo lala xiriirinaya kooxda kusoo laabashada Los Blancos iyo inay kooxda reer Spain dooneyso saxiixiisa.
“Maya, wax dareen ah uma sameyneyso Cristiano Ronaldo inuu kusoo laabto Real Madrid” ayuu Perez ku jawaabay haddii uu kabtanka Portugal uu dib u xiranayo maaliyadda caddaanka.
Waxa uu madaxweynaha Real Madrid intaas ku daray in sheekadaas ay buun-buunineyso majaladda MARCA, maadaama milkiilaha majaladda uu sidoo kale iska leeyahay kooxda Torino ee dalka magaalada Turin ka dhisan, sidoo kalena xafiiltan soo jireen ah kala dhexeeyo Juve.
Si kastaba ha ahaatee, Perez ayaa haatan u muuqda mid biyo qabow ku shubay in kooxdiisa iyo CR7 ay dib u midoobi karaan, iyadoo la xasuusto in laacibkii hore ee Manchester United uu yahay gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda Los Blancos kaddib sagaal sano oo uu kasoo ciyaarayay caasimadda Spain.
Xiriirka UEFA awood sharci ah ma u heystaa inuu joojiyo European Super League?... (Miyuu dhaqan gelin karaa ganaaxyada uu ku hanjabay? Yaase guuleysan kara haddii maxkamad la isla gaaro?)